कति जनउत्तरदायी छन हाम्रा नेताहरु – नेपाल डायरी डट कम
संबिधान सभाको निर्बाचन मा आफुले चुनाब जीतेमा यो गर्छु र उ गर्छु , जनताको संबिधान बनाउछु , गरिब , दलित, शोसित, पिडित , उत्पिडित्, मजदुर , किसान ( के के हो के के?) को हितमा संबिदान बनाउछु भन्ने हाम्रा नेता/ सभासद हरु गाउ-गाउ गएर केहि बोरा कागजात बोकेर काठमान्डौ फर्कन थालेका छन् । तर कति जनताको सुझाब संकलन गरे त हाम्रा नेता ले । १५, २० लाख? कि त्यो भन्दा पनि कम? के २० लाख को सझाबलाइ सम्पुर्न जनताको सुझाब मान्न सकिन्छ? के हाम्रा नेताले ताप्लेजुङ् को ओलाङ्चुङ् गोल , संखुवासभाको किमाथान्का, नुवाकोटको सिकरबेशि दार्चुलाको धार्चुला सम्म पुगेर सुझाब संकलन गरे त? जानु अगाडि नै आफुलाइ सुगम ठाउमा नपठाए नजाने अड्डि कसेर बसेका सभासद जिल्ला त गए तर जहा सम्म मोटर , हेलिकप्टर चडेर जान सकिन्थ्यो त्यहा सम्म मात्र । अझ कति नेता त आफुलाइ खटाएको ठाउमा जादै गएनन् ।
जनमत संकलनका लागी गीरीजा प्रसाद कोईराला को कार्यक्षेत्र काठमान्डु थियो ।
तर बिरामिको बाहानामा सुझाव संकलन टोलिमा एक् दिन पनि सरिक भएनन कोइराला। बरु भारत सम्म राजनितिक-उपचारको खोजि गर्न पुगे १ महिनाको अबधिमा। २-२ पटक बिराटनगर पुगेर भासण गर्न सक्ने गिरीजाबाबु काठमान्डौ मै रहेका जनताको घर दैलो जान सकेनन ।
चितबन पुगेर ने बि संघका कार्यकर्तालाइ लाठि बोकेर प्रतिकार मा ओर्लन सुझाब दिन सक्ने कोइराला ले कम्सेकम १,२ दिन भए पनि सुझाब् सन्कलन् टोलिमा सहभागि हुदा के कोइरालाको इज्जत घट्थ्यो?
सुझाब संकलन टोलिमा नजाने अर्का नेता हुन् – हालैको महाधिबेसन बाट एमालेको सक्तिसाली अध्यक्ष बनेका टाइसुट नेता झलनाथ खनाल ।
एमालेको अधिबेसन सकीएर फुर्सदमा रहेको भए पनि खनाल काठमान्डुमै “अखबारी भासण गरेर बसे -तर आफुलाइ खटाएको क्षेत्रमा गएनन । के यी नेताले चै आफुलाइ दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्दैन? किन यति अनुत्ततरदायी छन हँ हाम्रा नेताहरु जनता प्रति?
मन्त्री त मन्त्री भैहाले , कार्यब्यस्तता देखाएर गएनन् (टोलि मा समाबेश् पनि गरीएन ) सुझाब संकलन गर्न – मदेशि जनअधिकार फोरम का सांसद तिलक रावलको कुरा सुन्नुहोस-सुझाब संकलनमा जानका लागी संसद सचिबालय बाट आबस्यक रकम समेत बुझिसकेका रावल सुझाब संकलन गर्न आफुलाइ तोकिएको क्षेत्र मा गएनन्, न त पैसा नै फीर्ता गरे, अहिले आएर पत्र पत्रिकामा सो सम्बन्धि समाचार प्रकासित भए पछि चै उनले पैसा फिर्ता गर्छु भनेछन् । हेरौ फिर्ता गर्लान् कि पचाउलान् !
अघिल्लो कस्तो संबिधान बनाउने ?
अर्को कसरी भरे होलान जनताले यस्तो प्रश्न पत्र?